Iwo eTop 5 Metric uye Investment Vatengesi vari Kugadzira muna 2015
Chipiri, January 27, 2015 Douglas Karr
Kechipiri, Salesforce yakaongorora vatengesi vanopfuura zviuru zvishanu pasirese kuti vanzwisise zvakakosha zvegore ra5,000 pane dzese dhijitari. Hechino pfupiso yemushumo uzere waunogona kurodha paSalesforce.com. Kunyangwe zvinonetsa zvakanyanya zvebhizimusi kuri kuvandudza bhizinesi idzva, mhando yemitungamire, uye kufambirana nehunyanzvi, mashandisiro emashandisirwo emabhajeti uye nekuteedzera kufambira mberi kunokatyamadza.
Mintigo: Predictive Lead Scoring yeiyo Bhizinesi
Chitatu, November 19, 2014 Chitatu, Nyamavhuvhu 26, 2015 Douglas Karr
Sevashambadzi veB2B, isu tese tinoziva kuti kuve neinotungamira mamaki sisitimu yekuona inotengesa-yakagadzirira mafambiro kana vangangove vatengi kwakakosha kumhanyisa zvirongwa zvinobudirira zvekugadzira uye kuchengetedza kushambadzira-uye-kutengesa kuenderana. Asi kuitisa inotungamira yekumisikidza sisitimu iyo inoshanda chaizvo zviri nyore kutaurwa pane kuitwa. NaMintigo, iwe unogona ikozvino kuve nemapoinzi ekurovera mamodheru ayo anowedzera simba rekufungidzira analytics uye data hombe kuti ikubatsire iwe kuwana vatengi vako nekukurumidza. Kwete zvakare kufungidzira.
China, Kukadzi 7, 2013 Chitatu, Kukadzi 6, 2013 Douglas Karr
Sezvo huwandu hwezvinyorwa zvemashoko zvinoramba zvichikura, bhizinesi njere (BI) system iri kuwedzera (zvakare). Bhizinesi rehungwaru masystem anokutendera iwe kukudziridza kuburitsa uye madhibhodhi pane data kune ese masosi iwe aunosangana nawo. BIME iSoftware seSevhisi (SaaS) Bhizinesi reInternational system iyo inobvumidza iwe kuti ubatanidze kune ese ari maviri epamhepo uye epasi-nzvimbo munzvimbo imwechete. Gadzira kubatana kune ako ese data sosi, gadzira uye ita mibvunzo
Ndeipi yako Blog yaRFM?
Chitatu, Kurume 11, 2009 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Kubasa ndinenge ndichiita webinar svondo rino. Nyaya yacho yanga iri mupfungwa dzangu kare ndisati ndashandira Compendium Blogware, zvakadaro. Mumazuva ekutanga ebasa rangu rekushambadzira dhatabhesi, ini ndakabatsira kugadzira uye kugadzira software yaizobatsira vashambadziri kunongedza vatengi vavo. Iyo equation haina kumbochinja, kwenguva yakati rebei zvave zvese nezve kudzokorora, kuwanda uye kukosha kwemari. Zvichienderana nekutenga kwevatengi nhoroondo, unogona kukanganisa maitiro avo